Yolu sormak / Manontany ny lalana – Diyaloglar | OpenTran
Yolu sormak / Manontany ny lalana – Diyaloglar
Çevirmen & Sözlük çevrimiçi Türkçe-madagaskarlı çeviri Yolu sormak / Manontany ny lalana – Diyaloglar
Anna: Te hividy ny sarintanin'ny tanàna aho azafady.
Mpivarotra: Inty ianao. 6 pounds izany, Ramatoa.
Joseph: Manantena aho fa ho mora kokoa ny mahita ireo toerana eto amin'ity tanàna ity.
Anna: Izaho koa. Na izany aza, tena ratsy toetra aho amin'ny famakiana sarintany. Ahoana ny hevitrao?
Joseph: Tsy haiko. Tsy dia nandeha lavitra aho. Andao hojerena. Eo amin'ny Waterloo Road isika izao. Ka ahoana no ahatongavantsika any amin'ny Aquarium London?
Anna: Mieritreritra aho fa mila mandray ny lalamby ambanin'ny tany.
Joseph: Eny, raha ny fahitako azy amin'ny sarintany dia afaka mandeha eo fotsiny isika. Afaka mangataka tari-dàlana amin'olona isika raha sendra very isika.
Anna: Marina ny anao. Andao hiezaka ny handeha eo.
Joseph: Azafady, azafady!
Ramatoa (mpandalo 1): Ie?
Joseph: Miezaka ny mankany amin'ny Aquarium London aho. Mandeha amin'ny lala-mahitsy ve isika?
Ramatoa (mpandalo 1): Eny, ianao izany. Na izany aza, misy fomba fohy kokoa, fantatrao.
Josefa: Inona no lalana tokony halehantsika?
Ramatoa (mpandalo1): Raha mandroso hatrany amin'ny làlambe ianao dia hahita làlana malalaka hafa. Ny làlambe York. Raiso ny ilany ankavia ary mandehana amin'ity arabe ity. Rehefa tonga any North Block ianao dia mihodina miankavanana ary mandehana somary mandeha kely. Amin'ny fihodinana manaraka dia mandehana miankavia ary eto ianao manoloana ny Aquarium London. Mety ho somary sarotra ihany izany amin'ny voalohany, noho izany dia manoro hevitra anao aho hanontany olon-kafa rehefa eo amin'ny sampanan-dalana ianao.
Joseph: Misaotra betsaka! Mihevitra aho fa afaka mahita azy io isika izao.
Anna: Ka eo amin'ny sampanan-dalana izahay izao. Mahatsiaro ve ianao ny amin'ny lalana nitenenan'ilay Ramatoa hitazona azy?
Joseph: Heveriko, hoy izy hoe mijanona.
Anna: Ie, tsy azoko antoka. Heveriko, hoy izy, tazomy ny sisiny ankavanana. Andao hanontany olon-kafa.
Joseph: Hevitra tsara! Azafady, Tompoko!
Lehilahy antitra (mpandalo 2): Eny?
Joseph: Fantatrao ve ny fomba ahafahantsika mankany amin'ny Aquarium London avy eto?
Lehilahy antitra (mpandalo 2): Miala tsiny, fa vaovao aho eto ary tsy dia fantatro tsara ny tanàna.
Anna: Misaotra ihany!
Ramatoa tanora (mpandalo 3): Ie? Afaka manampy anao ve aho?
Joseph: Azonao atao ve ny milaza aminay ny fomba hahatongavana any amin'ny Aquarium London? Very kely eto isika.
Ramatoa tanora (mpandalo 3): Ie, azo antoka. Tena akaiky an'io ianao. Raha mihodina miankavia ianao ary mandeha hatrany amin'ny North Block dia mila mihodina miankavanana eo ianao ary mandeha mandritra ny fotoana fohy. Rehefa tonga amin'ny làlambe Belvedere ianao dia mihodina miankavia ary eto dia eo alohan'ny tranon'ny Aquarium ianao.
Joseph: Misaotra betsaka! Nanampy betsaka anay ianao.
Ramatoa tanora (mpandalo 3): Tongasoa anao!
Hafta sonu hakkında Manodidina ny faran'ny herinandro
Konser Bilet Rezervasyonları Famandrihana tapakila amin'ny kaonseritra
Giyim tarzı Fomba fitafiana
Özgeçmiş Hazırlama Manomana tohiny
Çevresel koruma Fiarovana ny tontolo iainana